कब्जियतको समस्या छ ? भुलेर पनि नखानुहोस् यी पाँच कुरा - HelloKhabar
कब्जियतको समस्या छ ? भुलेर पनि नखानुहोस् यी पाँच कुरा
२०७८ कार्तिक १५, सोमबार १६:०७
काठमाडौँ । गर्मीको समयमा कतिपयलाई पेटसम्बन्धि समस्याले सताइरहेको पाइन्छ।प्रायजसो खानपानमा विशेष ध्यान नदिनेहरुलाई यस्तो समस्याले पिरोल्ने गर्छ। त्यसैले गर्मीको समयमा खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ।
दूधबाट बनेका परिकार : यदि अपच वा कब्जियतले सताइरहेको छ भने दूधबाट बनेका परिकार खानु हुँदैन। दूधबाट बनेका परिकार पचाउन धेरै समय लाग्छ। यस्ता परिकारमा बोसोको मात्रा धेरै र फाइबरको मात्रा निकै कम हुन्छ। यस्ता परिकारको सेवनले कब्जियत बढ्ने मात्र हुँदैन मोटोपनाले पनि सताउने गर्छ।कब्जितबाट बच्न दूध वा दूधजन्य पदार्थ सेवन नगरौं। फ्रिजमा राखिएका परिकार : लामो समयदेखि फ्रिजमा राखिएका खानेकुरा खानु हुँदैन।यस्ता खाौपरिकारले पेटको समस्या उत्पन्न गर्छन्। त्यसैले सधैं ताजा तरकारी तथा फलफूलको सेवन गरौं। बिस्कुट वा कुकिज : मैदाबाट बनाइने कुनै पनि परिकार स्वास्थ्यलाई फाइदाजनक हुँदैनन्। नियमित बिस्कुट तथा कुकिज खाँदा पेटमा समस्या उत्पन्न हुन्छ। मैदाका परिकार स्वास्थ्यलाई हानी गर्ने भएकाले यस्ता परिकार कहिल्यै खानुहुँदैन। केरा : केराले खाना पचाउनमा ठूलो सहयोग गर्छ। त्यसैले खाना खाइसके पछि केरा खाने गरिन्छ। तर काँचो केरा खाँदा यसले ठूलै समस्या उत्पन्न गर्छ।सकेसम्म काँचो केरा कहिल्यै खानुहुँदैन।
फेरि कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट देखियो
उमेर पुग्दै गएपछि यस्तो खानपान विष समान ध्यान दिनुहाेस
ब्यानर टप हेलाेखबर - २०७८ कार्तिक १५, सोमबार १६:०७
ब्यानर २०७८ कार्तिक १५, सोमबार १६:०७
फिचर २०७८ कार्तिक १५, सोमबार १६:०७